Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/azo
Proverbe 169 Akondro masaka ifotony aho : tsinjo maso fa tsy azo hanina , ka jerena ihany. [Rinara 1974 #90]
Akondro masaka ifotony aho : tsinjo maso , fa tsy azonao hohanina , fa jerena ihany. [Veyrières 1913 #1556, Cousins 1871]
Proverbe 171 Akondronay no ho mamoa, ka azonay anaranam-po . [Veyrières 1913 #499, Cousins 1871 #78]
Akondronay no mamoa ka azonay anaranam-po . [Houlder 1895 #1562, Rinara 1974 #92]
Proverbe 848 Aza atao taria azon' adala . [Rinara 1974 #416, Cousins 1871 #366, Houlder 1895]
Proverbe 961 Aza manao an' Andriamanitra azo am-po mandrakariva. [Houlder 1895 #25]
Proverbe 967 Aza manao andriamanjaka azoko am-po. [Veyrières 1913 #193]
Proverbe 1202 Aza manao vava azon' Andriamanitra . [Houlder 1895 #32, Cousins 1871 #543]
Proverbe 1216 Aza manao vorona azon' adala ; ka na tsy maty aza, mifohafoha volo. [Houlder 1895 #436]
Proverbe 1562 Azoko amy ny vavany , hoy ilay nanjono toho. [Cousins 1871 #725]
Azoko amin' ny vavany , hoy ilay nanjono toho . [Veyrières 1913 #4742]
Azo tamin' ny vavany , hoy ilay nanjono toho . [Rinara 1974 #834]
Proverbe 1564 Azon' atody saron-droa ka sahiran-kevitra . [Rinara 1974 #831]
Proverbe 1566 Azon' ny haren-tsy manarana, ka mitafy lamba endrikendrika . [Houlder 1895 #1437, Veyrières 1913 #2422]
Azon' ny haren-tsy nanasatra ka mitafy lamba endrikendrika . [Rinara 1974 #832]
Hanao ahoana hianao : azon' ny haren-tsy manarana ka mitafy lamba endrikendrika . [Rinara 1974 #1265]
Proverbe 1830 Domohina azon’ Ingoaka : tompony manan’ era. [Samson 1965 #D14]
Proverbe 2263 Hanao ahoana hianao ? azon’ ny haren-tsy manarana, ka mitafy lamba endrikendrehina . [Cousins 1871 #1019]
Proverbe 2449 Hoditra azon' antitra : tsy hanina fa tanontanonina foana . [Veyrières 1913 #1814]
Proverbe 2606 Izaho angaha azon' ialahy nividy laona no handoa izany volabe izany? [Veyrières 1913 #4866, Rinara 1974]
Proverbe 2869 Keliray mahazo jiolahy , ka tano fa azoko , vonjeo aho fa lasany. [Veyrières 1913 #712]
Kely ray nahazo jiolahy : "Tano fa azoko , vonjeo aho fa lasany". [Houlder 1895]
Proverbe 3756 Manenji-balala maina andro , ka raha tsy azoko anio , azoko ampitso . [Veyrières 1913]
Proverbe 3811 Manjenjem-poana sahala amin' ny valala manatody . [Rinara 1974 #2118]
Manjenjem-poana , toy ny valala manatody . [Cousins 1871 #1622, Veyrières 1913]
Proverbe 4709 Nahoana hianao no manara-drafozana , ka hoy izy : Izay azoko aza mbola ho azy. [Rinara 1974]
Proverbe 4852 Ny afon-dolo, afon' angatra , ka tsy azonao angatahina . [Rinara 1974 #2827]
Proverbe 5247 Ny lainga toy ny vato am--balam-parihy , na tsy hitam-pangady raha lohataona aza, hitan' ny antsy raha fahavaratra . [Rinara 1974 #3062]
Proverbe 5495 Ny Sakalava no miady azon' ny anjaingin' Imamonjy . [Veyrières 1913 #445, Houlder 1895]
Ny sakalava no miady dia anjaingin' Imamonjy . [Rinara 1974 #3236]
Proverbe 5702 Ny vintana tsy azon' olona ovana , fa didy avy amin' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #101]
Proverbe 6484 Sambo- -balala maina andro ka raha tsy azoko anio , azoko rahampitso . [Rajemisa 1985]
Proverbe 7347 Trandraka azon’ ny liana . [Samson 1965 #T125]
Proverbe 7446 Tsy azon' ny olona ny lambo , raha tsy ny alika . [Veyrières 1913 #5415]
Proverbe 7730 Tsy misy be fiarovana tahaka ny ondrindrano : tsirika telo, antsibe iray, nefa raha azon’ ny tandroho mitogaga . [Cousins 1871 #3512]
Tsy misy be fiarovana toy ny ondrindrano , fa tsirika telo, antsibe iray nefa mitolagaga raha voafaokan' ny tandroho . [Rinara 1974 #4706]
Proverbe 8325 Vony tsy azon' afo , vary tsy hanim-pody . [Veyrières 1913 #830]